स्टेरोइडको एउटा साइकलले केहि गर्छ - BikeHike
स्टेरोइडबाट नतिजा कति चाँडो देख्नुहुन्छ?
के स्टेरोइडले कसरत नगरी काम गर्छ?
कसैले स्टेरोइड लिइरहेको छ भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं स्टेरोइड बिना कति ठूलो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले स्टेरोइडहरू लिन बन्द गर्नुभयो भने के हुन्छ?
क्रिएटिन स्टेरोइड हो?
राम्रो बल्क चक्र के हो?
के तपाइँ Tren र Deca सँगै चलाउन सक्नुहुन्छ?
के सबै प्रो बडीबिल्डरहरूले स्टेरोइडहरू प्रयोग गर्छन्?
के तपाइँ स्टेरोइड बिना सिक्स प्याक पाउन सक्नुहुन्छ?
बडीबिल्डरहरू कसरी यति ठूलो हुन्छन्?
तपाईं कसरी ASAP ज्याक प्राप्त गर्नुहुन्छ?
यो ठूलो वा दुबला हुनु राम्रो छ?
म कसरी काटिएको abs प्राप्त गर्न सक्छु?
के बफ साथीहरूले स्टेरोइड लिन्छन्?
प्राप्त ज्ञान यो हो कि टेस्टोस्टेरोन कम्तिमा 10 हप्ताको लागि साप्ताहिक इंजेक्शन हुनुपर्छ। तैपनि अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्सको लिस्मोरमा रहेको दक्षिणी क्रस युनिभर्सिटीका खेलकुद वैज्ञानिक रोबर्ट वेदरबीले अध्ययन सञ्चालन गरेकाले प्रदर्शनमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि मात्र तीन हप्तापछि भएको पाए।
एनाबोलिक स्टेरोइडहरू, जसलाई anabolic-androgenic स्टेरोइडहरू (aass) पनि भनिन्छ, मांसपेशी निर्माण गर्न र एथलेटिक प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छ, तर तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावहरू पनि गर्न सक्छन्, विशेष गरी प्रयोग गर्दा। स्टेरोइडहरूले तपाईंलाई ठूलो, छिटो, बलियो बनाउँदछ, र कसरतको अनुपस्थितिमा पनि न्यूरोमस्कुलर गतिविधि बढाउनेछ।
स्टेरोइड प्रयोग मुँहासे को संकेत। द्रुत मांसपेशी / वजन वृद्धि। बढेको स्तन (पुरुषहरूमा) Paranoia। अति सक्रियता। अनुहारको कपाल वृद्धि (महिलाहरूमा)।
FFM: (शरीरको तौल x (% मा 100 - शरीरको फ्याट प्रतिशत) / 100 ∆ तिनीहरूले निष्कर्ष निकाले कि एनाबोलिक स्टेरोइडहरू नलिने एथलीटहरूको सूचकांक अधिकतममा लगभग 25 हुन्छ। स्टेरोइड प्रयोगकर्ताहरूले त्यो मूल्यलाई पार गर्न सक्छन्, प्रायः धेरैले। यसले अनुमानमा जान्छ कि लगभग 25 को FFMI एक प्राकृतिक सीमा हो।
स्टेरॉयड को उपयोग अचानक रोक्न सकिदैन; औषधि टेपिering एड्रेनल ग्रंथि समय स्राव को आफ्नो सामान्य ढाँचामा फर्कन को लागी समय दिन्छ। फिर्ता लक्षण र संकेत (कमजोरी, थकान, भोक कम, वजन घटाने, मतली, उल्टी, पखाला, पेट दुखाइ) धेरै अन्य चिकित्सा समस्याहरु नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कलेजो, मृगौला र प्यानक्रियाज द्वारा उत्पादित एमिनो एसिडको संयोजन हो। क्रिएटिन स्टेरोइड होइन - यो प्राकृतिक रूपमा मांसपेशी र रातो मासु र माछा मा पाइन्छ, यद्यपि शरीर सौष्ठव वेबसाइटहरु र तपाइँको स्थानीय GNC मा बेचेको पाउडर फारम भन्दा धेरै कम स्तर मा।
पहिलो, सबैभन्दा प्रभावकारी बलिङ चक्र सामान्यतया कम्तिमा 3-4 महिना हो, यदि लामो छैन। जहाँ यो केहि मानिसहरूको लागि गाह्रो हुन सक्छ यो हो कि यदि तपाईं अविश्वसनीय रूपमा आफ्नो म्याक्रोन्यूट्रिएन्टको शीर्षमा हुनुहुन्छ भने, तपाईले बल्किङ चक्रमा मांसपेशिहरु प्राप्त गर्दा केहि बोसो पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Deca Tren संग स्ट्याक गर्न सकिन्छ? हो, यसले पक्कै पनि बल्क गर्दा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। आकार र बल लाभहरू एक्लै चल्ने ट्रेनको विरोधको रूपमा बढाइनेछ। साइड इफेक्टहरू पनि धेरै गम्भीर हुनेछैन, ट्रेन-मात्र चक्र (बढाइएको टेस्टोस्टेरोन दमन बाहेक) को तुलनामा।
प्रतिस्पर्धात्मक बडीबिल्डरहरू बीचको प्रयोग सबैभन्दा सामान्य देखिन्छ - जसमध्ये 54 प्रतिशतले स्टेरोइडहरू लिन्छन्, एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो - यो त्यो जनसंख्यामा मात्र सीमित छैन।
के म मांसपेशी निर्माण गर्न र स्टेरोइड बिना ठूलो हुन सक्छु? जवाफ हो हो। यद्यपि, जहाँ एक स्टेरोइड प्रयोगकर्ता धेरै बढ्दै गइरहेको छ जुनसुकै प्रकारको प्रशिक्षण उसले वा उसले गरे तापनि, एक प्राकृतिक लिफ्टरले उसले कसरी व्यायाम गर्छ, कुन पूरकहरू प्रयोग गर्ने र कसरी/कहिले खाने भन्नेमा धेरै ध्यान दिन आवश्यक छ।
छोटो तर अधिक तीव्र कसरत र पुन: प्राप्तिको लागि अधिक समयको साथ, तिनीहरू ओभरट्रेन गर्दैनन्, तर मांसपेशीहरूलाई आराम गर्न र बढ्नको लागि थप समय दिन्छ। नतिजा भनेको बडीबिल्डरहरू हुन् जसले आफ्नो आनुवंशिक क्षमतालाई अधिकतम दुबला शरीरको मास र आकार विकास गर्न सक्षम छन्।
रिप्ड चरण 1 प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको पूर्ण गाइड: मांसपेशी निर्माण गर्न को लागी बल ट्रेन। चरण 2: बोसो गुमाउन क्यालोरीहरू काट्नुहोस्। चरण 3: पर्याप्त प्रोटीन खानुहोस्। चरण 4: स्वस्थ बोसोको मध्यम मात्रा खानुहोस्। चरण 5: कार्ब साइकल चलाएर हेर्नुहोस्। चरण 6: भाग नियन्त्रण प्रयोग गर्नुहोस्। चरण 7: उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण (HIIT) थप्नुहोस् चरण 8: केही सुत्नुहोस्।
दुबला शरीर यी कारणहरूको लागि ठूलो शरीर भन्दा राम्रो छ: अधिक लचिलो छ, तपाईंलाई प्राकृतिक देखिने टोन्ड फिगर प्रदान गर्दछ। यो अन्तर्निहित मांसपेशी प्रकट गर्न बाह्य बोसोको हानि द्वारा प्राप्त हुन्छ। यस लेखमा, तपाइँ दुबै शरीर प्रकारका स्वास्थ्य लाभहरू, कसरी प्राप्त गर्ने र तपाइँ कुन चाहानुहुन्छ भन्ने बारे जान्नुहुनेछ।
छिट्टै र सुरक्षित रूपमा सिक्स-प्याक एब्स प्राप्त गर्न यहाँ 8 सरल तरिकाहरू छन्। थप कार्डियो गर्नुहोस्। Pinterest मा साझा गर्नुहोस्। तपाईंको पेट मांसपेशिहरु व्यायाम गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोटिन सेवन बढाउनुहोस्। उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण प्रयास गर्नुहोस्। हाइड्रेटेड रहनुहोस्। प्रशोधित खाना खान बन्द गर्नुहोस्। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेटमा कटौती गर्नुहोस्। फाइबरमा भर्नुहोस्।
स्टेरोइडको प्रयोग विशाल बफ साथीहरूमा सीमित छैन। धेरै साना केटाहरूले टुक्रा टुक्रा रहन र दुबला मांसपेशी जन प्राप्त गर्न स्टेरोइडहरू लिन्छन्।
कसरी स्टेरोइड साइकल गर्ने
द्रुत उत्तर: कसरी स्टेरोइडहरू सुरक्षित रूपमा साइकल गर्ने
द्रुत उत्तर: स्टेरोइडहरूले मासिक धर्म चक्रलाई असर गर्न सक्छ
प्रश्न: के साइकल ट्रेडरले केहि खर्च गर्छ
द्रुत उत्तर: स्टेरोइडको चक्र कति महँगो छ
प्रश्न: तपाईं स्टेरोइडहरूमा कति लामो साइकल गर्न सक्नुहुन्छ
स्टेरोइडको 1 चक्र कति लामो छ
प्रश्न: तपाईंले स्टेरोइडहरू कति लामो समयसम्म साइकल गर्नुपर्छ
स्टेरोइड को एक चक्र कति छ